Ahoana no hilazana raha manana tsiro tsara amin'ny Anime ianao - Hafa
Ahoana no hilazana raha manana tsiro tsara amin'ny Anime ianao
Inona no mamaritra ny tsiro tsara amin'ny anime? Raha ny marina: inona no mamaritra ny tsiro TSARA amin'ny zavatra rehetra?
Ny talenta ve?
Ny fomba fisainanao ve?
Fijerena Shounen toa an'i Naruto, DBZ na One Piece ve izany?
Tsara be ve ianao?
Sa ve mampihetsi-po ny ego anao hahatsapa ho zava-dehibe kokoa?
Raha tsy azonao lazaina izany: Manesoeso aho.
Amin'ny fahamatorana rehetra, isaky ny mahita olona miresaka momba ny “tsiro tsara” amin'ny anime aho, dia marina foana ireo zavatra ireo…
Manaporofo izany fa manana tsiro tsara amin'ny anime ianao:
1. Maneso anao ny mpankafy anime hafa
Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no sendra mpankafy (adala) maneso anao amin'ny seho tianao. Toy ny hoe iray amin'ireo mpitsara ao ambadiky ny tontolon'ny 'X-Factor' izy ireo.
WTF? Tianao ny SAO?
Tsy tianao ny AOT? Adala f **** ianao!
Ity no karazan-javatra mampihomehy ahy SASANY ampahany amin'ny vondrom-piarahamonina anime. Maneso ny tsironao ny olona mba hahatsapany tsara ny tombotsoany manokana. Tena manongana ny hafa hanandratra ny tenany.
Raha tsy fahatokisan-tena izany dia inona izany?
2. Voahilikilika noho ny tombontsoanao ianao amin'ny seho anime mampiady hevitra
Eny, izany dia zavatra TENA. Misy ireo forum sy vondrona an-tserasera izay FANAROA ny olona noho ny fitiavana anime 1 amin'ny iray hafa.
Andao lazaina hoe: mpankafy iray no tia Sword Art Online, ary mieritreritra izy ireo fa tsara kokoa noho ny Attack on Titan ohatra ny SAO…
sarimihetsika fiainana 10 ambony
Na mety mieritreritra ianao fa Akame Ga Kill dia tsara kokoa noho ny Code Geass.
Na tianao Pokemon tsara kokoa noho ny tianao ny Death Note…
Na tsara kokoa: tianao kokoa i Ichigo avy any Darling In The Franxx noho ny tianao Zero Two… Ho an'ny zavatra tsy dia misy dikany toy izany dia hanaisotra anao ny mpankafy hafa. Sakano ianao. Ary raiso ho toy ny a ambany zanak'olombelona.
anime hatsikana tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Averina indray, raha tsy fahatokisan-tena izany dia mila misy miteny amiko hoe inona izany.
Tena manafintohina ve ny tsiro 'tsara'?
3. Mikendry anao ny trolls raha vao mizara ny hevitrao ianao
Fantatrao ny troll resahiko.
Profile tsy misy sary.
Kaonty ao amin'ny Reddit izay mandany 24 ora isan'andro mitady zavatra tsy ifanarahan'izy ireo, hahafahan'izy ireo manafika, mitsikera ary maneso anao.
Na ny hevitra izay ilazana anao hoe: 'sombin-javatra' noho ny fisainanao hafa fa tsy fanarahana ny fomba fijery nentim-paharazana.
Mampalahelo nefa marina. “Tsiro tsara” (na tsiro ratsy araky ny filazan'ny hafa) dia sakanana. Satria ny 'tsiro' ataonao dia mahatonga ny olona tsy fantatrao akory hahatsapa ho tsy matoky tena na tezitra, tsy misy antony.
4. Tsy miraharaha izay faritan'ny mpankafy hafa hoe 'tsiro tsara' ianao
Ny fitsikerana ahy dia ambaniko.
Amin'ny farany: ny tsiro tsara dia mivelatra.
Troll dia afaka milaza izay tiany ary mieritreritra izay tiany. Fa amin'ny faran'ny andro, tsy zava-misy ny hevitra.
Inona no tsapanao ary inona ianareo minoa aza mifandraika amin'ny marina, diso, na ny 'fahamarinana' amin'ny fomba misy ny zavatra.
1 + 1 = 2, fa ny hevitra tsy mitovy n'inona n'inona izay tsapanao mitovy izy ireo.
Ho an'ny olona rehetra izay maniry ny Death Note, dia misy olona 1000 izay mihevitra fa ity no andiany mahatsiravina indrindra eto an-tany. Toy izany koa ho an'ireo olona tia Monster na Lagoon Mainty.
Ary izany no hakanton'ny hevitra: misy foana ny olona HANAIKY anao. Na inona na inona.
Ny fitandremana izay faritan'ny mpankafy hafa ho 'tsiro tsara' anefa dia fandaniam-bola. Tsy lazaina intsony ny fomba fisainana tsy mahasalama. Ka tianao ny tianao ary mijery ny sarimihetsika tianao hojerena.
Moa ve misy fitsipi-pitondrantena tena tsara amin'ny anime?
Jereo, tiako be ny hevitro manokana, tsy adala aho. Ary tsy tokony ho ianao koa. Ny hevitra dia voaforona, ary ny 'tsiro tsara' tsy misy hafa amin'izany.
Tiako i SAO. Tiako i Clannad. Tiako i Monster. Ary fampisehoana anime maro hafa. Ary na izany aza dia nahita olona maro tsy tia an'i SAO sy Monster aho.
Eny, tsiro tsara amin'ny anime dia mitombina tokoa.
Ny mieritreritra raha tsy izany dia tsy hoe miavonavona, mifikitra ary mieboebo.
Ka ho anao troll: ekeo izy dia afaho. Raha tokony hanambany olona ianao ary hanao toa ny masoandro miposaka avy ao aminao dia fantatrao izany.
Manana hevitra holazaina? Lazao ny sainao…
Maninona ny piraty no manimba ny indostrian'ny anime, ary manampy azy amin'ny fotoana mitovy
Ny mpankafy Anime Stereotypes mahasosotra indrindra dia mankahala ao anatin'ny 60 segondra
Antony 5 tsotra maninona no tsy noentina amin'ny fahitalavitra nasionaly i Anime
Teny fampiasa Boruto tsy azo tsaroana indrindra ilainao ho toy ny mpankafy Anime
Manga romantika nahazo alalana ofisialy 17+ Hanampiana ny famorianao
Andiam-bika avy amin'ny mpankafy Anime 'Gantz' Tokony hojeren'ny mpankafy
Seho Anime 9+ izay mety maharikoriko ny mpankafy ary indrindra ny any ivelany
10+ Sarimihetsika Anime ho avy & OVA'A amin'ny fahavaratra 2020!
Kuroko's Basketball Ny Sarimihetsika: LAME GAME farany azo avy amin'i Crunchyroll
Mpampianatra Anime 12 lehibe indrindra hihaonanao
Fanononana 7 misaki Ayuzawa ho an'ireo mpankafy tovovavy
Ahoana no ifaninanan'ny Tower Of God amin'ny AOT, Demon Slayer & Black Clover ho an'ny laza
20 amin'ireo tsonga Chihayafuru tsara indrindra ho an'ireo mpankafy tantaram-pitiavana sy i Josei
lisitra anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
inona ny anime lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra